Anyị na-akụziri gị ka ị jiri Telegram Plus na vidiyo | Gam akporosis
Mgbe esemokwu niile bilitere mgbe ọ gasịrị oke mmachi ahụ ndị WhatsApp Plus tara ahụhụ site n'aka ndị okike WhatsApp, ngwa mbụ maka gam akporo. Mmepe nke Whatsapp gbakwunyere kpebiri ịkwụsị mmelite ha nke ọma na ngwa na ugbu a ha juru anyị anya na Mwepụta Telegram Plus kpam kpam n'efu ma dị site ugbu a na Playlọ Ahịa Google, ụlọ ọrụ ngwa ngwa maka gam akporo.
N'uche m dị umeala n'obi dị ka onye ọrụ nke ngwa gam akporo abụọ, abụọ WhatsApp dị ka telegram. Nke a nwere ike ịbụ oké agbam ume na Telegram mkpa idowe onwe ya ebe o kwesiri ibu site na oge mbu, ma mechara kpuchie ngwa ndu na nbudata na Storelọ Ahịa Play, nke bụ onye ọzọ karịa WhatsApp maka gam akporo. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịma ihe niile Telegram Plus na-enye anyị yana otu esi eji ya, a na m enye gị ndụmọdụ ka ị pịa "Nọgidenụ na-agụ", Ebe ọ bụ na mgbe ị na-abanye isiokwu ahụ, ị ​​ga-ahụ nyocha vidiyo zuru ezu ebe anyị wepụrụ ngwa ahụ Telegram Gụnyere na anyị na-akụziri gị nzọụkwụ site nzọụkwụ ụzọ ziri ezi iji ya.
1 Kedu ihe Telegram Plus na-enye anyị maka gam akporo?
2 Otu esi eji Telegram Plus
Kedu ihe Telegram Plus na-enye anyị maka gam akporo?
Telegram gbakwunyere maka gam akporo, Ọ bụ ngwa a na-enyocha ngwa ngwa Telegram maka gam akporo, ọ bụ ezie na mgbakwunye dị oke egwu na ntọala ya nke anyị ga-enwe ike ịnweta site na ihe ngosi ihe eji eme ihe mara mma, nke gụnyere otu ngalaba karịa nke mbụ .
Ihe mgbakwunye ọhụrụ nke aha ya na-agwa anyị ihe niile. N'okpuru aha nke Thematic anyị ga-ahụ ọtụtụ nhọrọ iji gbanwee ihe ọ bụla na ngwa ahụ. Site na font size, nkụnye eji isi mee ma site na isi ma ọ bụ na izugbe ihuenyo, site na chat ihuenyo ma ọ bụ na kọntaktị na ihuenyo.
Ụfọdụ nhọrọ iji dejupụta ngwa ahụ na ọrụ dị egwu dị ka chekwaa isiokwu emepụtara ozugbo na ebe nchekwa anyị, iji nwee ike ma ọ bụ nwee nhọrọ iji mepụta ma chekwaa isiokwu dị iche iche iji nwee ike iji ha, dịka ọmụmaatụ, dịka ọnọdụ anyị ma ọ bụ ebe anyị nọ.
Nke a bụ nyocha vidiyo zuru ezu nke Telegram Plus ebe anyị na-akụziri gị nzọụkwụ site na nkwụsị otu esi eji Telegram Plus, ma mara, dịka ọmụmaatụ, akụkụ ndị anyị nwere ike ịgbanwe, ihe na-eme mgbe anyị na-agbanwe ihe ọ bụla ma ọ bụ ebe a na-echekwa isiokwu ndị e kere ma chekwaa na Telegram Plus.
Otu esi eji Telegram Plus
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » [Video] Telegram Plus nwere ike ịbụ nnukwu agbamume nke Telegram enweghị. Anyị na-egosi gị otu esi eji ya